Tuhun musuqmaasuq looga cabsi qabo inuu ku faafo hayadda socdaalka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Tuhun musuqmaasuq looga cabsi qabo inuu ku faafo hayadda socdaalka
La daabacay måndag 25 mars 2013 kl 14.30
Saraakiil ka howl-gasha hayadda socdaalka ayaa lagu tuhun-san yahey iney iibiyeen xeerka deggenaansho ee dalkan. Xeer-ilaaliyaha dawladda Nils-Eric Schultz ayaa aamin-san in baaritaan amuurtaa ku saabsan ee iminka socdaa uu sii balaaran karo.
Dhanka kale hayadda socdaalka ayaa dhowaantan magacaabi doonta guddi-hoowleed loogu talo galey sidii looga hor-tegi lahaa falalka laaluushka. Middaasina ugu wacan tahay sidii horay loogu ogaan lahaa, looga hor-tegi lahaa saameeyn middaasi la xiriirta ee dibadda laga soo abaabuley.
Xeerka deggenaansho ayaa la siiyaa muwaadiniinta heysta dhalashooyinka waddammada EU-da iyo EES iyo qaraabadood, middaasina oo xaq u siineeysa iney dalka ku sugnaan karaan muddo saddex bilood dhaafsiisan iyaga oo aan laheyn xeerka deggenaansho ee joogtada ah.
Bishii jannaayo ee sannadkan ayaa gacanta lagu dhigey laba sarkaal oo horey uga howl-geli jirey hayadda socdaalka, kuwaasina oo lagu tuh-sanaa iney xeerka deggenaansho ka iibiyeen soo-galooti.